अंकुरित खाद्यपदार्थ : स्वास्थ्यका लागि अमृत भोजन - ज्ञानविज्ञान
यो पोस्ट हामीले स्वास्थ्य खबरपत्रिका बाट साभार गरेका हौ
Don't Miss it यी खानेकुरा मिसाएर कहिल्यै नखानुस्,नत्र ज्यान जान पनि सक्छ ।
Up Next के हुन् खुसीका अवरोधक, कसरी रहने खुसी ?
कसैको बानी हुन्छ विहान बेडमै चिया पिउने । कतिपय विहान काम गर्ने व्यक्ति खाली पेटमा जे पायो त्यहि खाएर निस्कछन्…
असफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ? जान्नुहाेस्
सास फेरे जस्तै रहेछ कमाउनु र कमाएको पैसा समाजकै हितमा लगाउनु भनेको । जसरी हामी श्वास लिन्छाै तर श्वास फेर्दिन…
३० काटेपछि पुरुषमा देखापर्छ यस्ता समस्याहरु
प्रायलाई लाग्छ पुरुषको शरीर हातपत परिवर्तन हुदैन तर यो सोच गलत हो। ३० काटेपछी पुरुषको शरीरमा आन्तरिक परिवर्तनभएर धेरै किसिमको…